चितवनका पालिकालाई चार अर्ब बढी अनुदान : कुन पालिकालाई कति ? – Shasankhabar
चितवनका पालिकालाई चार अर्ब बढी अनुदान : कुन पालिकालाई कति ?
चितवन । चितवनका पालिकाले ४ अर्ब भन्दा बढी रकम अनुदान पाएकाछन् । जिल्लामा रहेका ७ वटा पालिकामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि छुट्याएको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बाँडफाँड गरेको छ । चितवनका सात पालिकाले चार अर्ब ३० करोड सात लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन्।
रत्ननगर नगरपालिकाले चालुतर्फ ४९ करोड ३४ लाख र पुँजीगत तीन करोड ७९ लाख गरी जम्मा ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १९ करोड ९३ लाख, सशर्त अनुदान ३२ करोड ३८ लाख र समपुरक अनुदान ८२ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
राप्ती नगरपालिकाले चालुतर्फ४६ करोड तीन लाख र पुँजीगत दुई करोड ९४ लाख गरी जम्मा ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १७ करोड ४५ लाख र सशर्त अनुदान ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
माडी नगरपालिकाले चालुतर्फ ४० करोड ३१ लाख र पुँजीगत पाँच करोड सात लाख गरी जम्मा ४५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १३ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदान ३१ करोड ४१ लाख र विशेष। अनुदान ८३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
खैरहनी नगरपालिकाले चालुतर्फ ३८ करोड ६४ लाख र पुँजीगत तीन करोड ४९ लाख गरी जम्मा ४२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १७ करोड २० लाख, सशर्त अनुदान २३ करोड ६८ लाख र विशेष अनुदान एक करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कालिका नगरपालिकाले चालुतर्फ ३६ करोड १२ लाख र पुँजीगत चार करोड ९ लाख गरी जम्मा ४० करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १४ करोड ६९ लाख, सशर्त अनुदान २४ करोड सात लाख र समपुरक अनुदान १ करोड ४५ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
इच्छाकामना गाउँपालिकाले चालुतर्फ ३२ करोड १६ लाख र पुँजीगत तीन करोड ८१ लाख गरी जम्मा ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । जसमा समानीकरण अनुदान १० करोड ५५ लाख, सशर्त अनुदान २३ करोड ७६ लाख र विशेष अनुदान एक करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।